शाओमीले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा नयाँ प्रविधि दिंदै आएको छ: कोठारी :: Setopati
चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी शाओमीका उत्पादनहरु नेपालमा पछिल्लो समय लोकप्रिय भइरहेका छन्। सस्तोदेखि मध्यम मूल्य श्रृखलाका स्मार्टफोनलाई नेपाली बजारमा धेरै अघि सारिरहेको कम्पनीले पछिल्लो समय अरु उत्पादनलाई पनि ल्याएको छ।
स्मार्टफोन एसोसरिजका साथै पछिल्लो समय स्मार्ट टीभी पनि शाओमीले नेपाली बजारमा ल्याएको छ। स्मार्टफोनमै पनि बजेट मूल्यका(सस्तो) नयाँ नयाँ मोडल ल्याइरहेको छ। नेपाली बजारमा शाओमीको उत्पादन, उपभोक्ताको रोजाइ के कस्ता छन्। कम्पनीले नेपाली बजारलाई कसरी हेरिरहेको छ? यी र यस्तै विषयमा शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर शौरभ कोठारीसँग गरिएको कुरकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली बजारमा स्मार्टफोनको बिक्री कस्तो रहेको छ?
गत एक वर्षमा स्मार्टफोन नेपालमा एक आधुनिक समयको आवश्यक वस्तुको रुपमा देखा परेको छ। रिमोट वर्किङ्ग र लर्निङ्ग फ्रम होम सामान्य हुँदै जाँदा प्रयोगकर्ताहरु निरन्तर नयाँ नयाँ ग्याजेट्सहरु खोजिरहेका छन् जसले उनीहरुको वर्क फ्रमहोम र ई–लर्निङ्ग आवश्यकताहरुलाई मद्दत पु¥याएर सुधार ल्याउन सक्छन्। हामी यसलाई बुझ्दछौँ र एक पटक बजार खुल्न साथ हामीले मागको अन्तर पूरा गर्ने आशा गर्छौं।
अहिले र बितेको १२ महिनादेखि हामी सरकारी निर्देशमा रहेर बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइरहेका छौँ। हाम्रा साझेदारहरु र कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा सँधै हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । पछिल्लो एक वर्षमा हामीले निरन्तर हाम्रा साझेदार र ग्राहकहरुलाई सुरक्षित राख्दै व्यापारलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं। अहिलेको संकटपूर्ण समय नबित्दासम्म हामी यसैगरी प्रयास जारी राख्नेछौं।
शाओमीले आफू नेपालको नम्बर एक मोबाइल ब्रान्ड भएको दाबी गरेको छ। तपाईँले यसको आधार कहाँबाट पाउनुभयो? नियमक नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको तथ्यांकले त त्यस्तो देखाउँदैन।
आईडीसी वल्र्डवाइड क्वाटर्ली शिपमेन्ट ट्रयाकरका अनुसार अनुसार शाओमी सन् २०२० मा नेपालको नम्बर १ स्मार्टफोन ब्रान्ड हो। आईडीसी बजार को प्रिमियर ग्लोबल हो। जसले मार्केट इन्टेलीजेन्स, सल्लाहकार सेवाहरू, सूचनाप्रविधि दूरसञ्चार र कन्ज्युमर टेक्नोलोजी मार्केट सेवा प्रदान गर्छ।
हामी यस उपलब्धिबाट खुसी छौँ र हाम्रो मी प्रशंसकहरुलाई उनीहरुको अविरल प्रेम र समर्थनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछा्रैँ। यस्ता उपलब्धिहरुले हामीलाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरको प्रविधि प्रदान गर्ने हाम्रो मिशनतर्फ प्रोत्साहित गर्दछ।
पछिल्लो समयमा एउटा उत्पादनको ग्लोबल लञ्च नेपाली बजारबाट शाओमीले गरेको थियो। के विस्तारै अब नेपाली बजार प्रति कम्पनीको धारणा परिवर्तन हुन थालेको हो?
शाओमीको लागि नेपाल सँधै महत्वपूर्ण बजार रहेको छ। प्राविधिक रुपमा अगाडि रहेको देशमा मी फ्यानहरुले बजारमा हाम्रो उत्पादनहरुको सराहना गर्दै आएका छन् र नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न उत्सुक रहेका छन्।
हामीले देशभित्र प्रिमियम उत्पादनहरुको माग रहेको देखेका छौँ। बजारको यही माग हेरेर सान्दर्भिक मूल्यका उत्पादनहरु ल्याइरहेका पनि छौ। गतवर्ष हामीले फ्ल्यागशिप र सेमी फ्ल्यागशिप उत्पादनहरु जस्तै मी १०, मी १० लाइट र रेडमी के२० सिरिज लन्च गरेका थियौं। हामीले नेपालमा मी वाच, टिभी स्टिक, ट्रिमर,ब्यान्ड ५, सोनिकबास वायरलेस ईयरफोन, पावरब्यान्क आदि जस्ता ३० वटा नयाँ इकोसिस्टम उत्पादनहरु ल्याइसकेका छौं।
शाओमीले पोको ब्रान्डका फोन नेपाली बजारमा हालै ल्याएको थियो। यो ब्रान्डका पछिल्ला फोनमा कस्ता फिर्चस छन् जसले गर्दा नेपाली उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन्?
हामीले नेपालमा नवीनता प्रदान गर्ने सपनाका साथ पोकोे फोनहरुको लन्च गरेका थियौँ जुन एकदमै महत्पूर्ण हुन गयो। हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै डिसिजन मेकिङ्गलाई विविधतापूर्ण बनाउनमा केन्द्रित छ। हाम्रो पोको एफ १ को पहिलो बिक्री सन् २०१८ मा भएको थियो (दराजमा ११.११ सेल) जसले केही मिनेटमै हजारौँ युनिटहरु बिक्रीभएर नेपालको ईकमर्समा रेकर्ड सिर्जना गरेको थियो।
हामीले हालसालै बजारमा पोको एम २ र पोको सी ३ जस्ता पोको डिभाइसहरु ल्याएका थियौँ। यी डिभाइसहरु प्रयोगकर्तालाई छनोट गर्नका लागि टप अफ द लाइन स्पेसिफिकेसनका साथ आउँछन्।
उदाहरणका लागि पोको एम २ एक मिडियाटेक हेलियो जी८० अक्टाकोर प्रोेसेसर र दुई कर्टेक्स ए ७५ २ गिगा हट्र्ज को साथ आउँछ र ६ कर्टेक्स ए ५५ कोर प्रोसेसर १.८ गिगा हट्र्जको साथ आउँछ। मिडियाटेकको गेमिङ्ग सुविधाहरुले प्रदर्शन र दक्षताबीच सन्तुलन ल्याएर पोको एम २ ले प्रयोगकर्ताहरुलाई अनुकूलित गेमिङ्ग अनुभवको मज्जा लिन मद्दत गर्छ।
अर्को तर्फ पोको सी ३ बजारमा एक धेरै किफायती ट्रिपल क्यामेरा फोन हो। यो एक एआई ट्रिपल क्यामेरा सेटअपको आउँछ जसमा १३ मेगापिक्सेल प्राइमरी सेन्सर, २ मेगापिक्सेल म्याक्रो सेन्सर र २ मेगा पिक्सेल डेप्थ सेन्सर समावेश छ।
डेप्थ सेन्सरले केही व्रिmस्प पोर्टरेट र व्रिmमी बोकेह ल्याउन मद्दत गर्दछ भने म्याक्रो सेन्सरले केही फन क्लोज अपका साथ ७२० पी मा म्याव्रmो भिडियो सुट गर्न मद्दत गर्दछ।
शाओमीको स्मार्ट टिभी कस्तो छे? अरु ब्रान्डका स्मार्ट टिभीको तुलनामा मूल्य र फिचर्सका हिसाबले यसमा के लाभ छ?
हाम्रो विश्वासमा मी टिभीमा यसको शानदार सफ्टवेयर हो। हाम्रा टिभीहरु इमर्जिङ्ग टिभी टेक्नोलोजीको फोरफ्रन्टमा रहेको छ जसले राम्रो पिक्चर क्वालिटी, इन्व्रmेडिबल अकुस्टिक अडियो र ग्रेट लाइफस्टाइल डिजाइनका साथ आउछन्।
हामीले हालसालै हाम्रो स्मार्ट टिभीहरुको फूल रेन्ज लन्च गरेका छौँ जसमा मी टिभी ४ ए ३२ इन्च, मी टिभी ४ ए ४० इन्च, मी टिभी४ ए हराइजन एडिसन४३ इन्च र मी टिभी ४ एक्स ६५ इन्च रहेका छन् जसले नेपालमा हाम्रा मी फ्यानहरुमा राम्रो प्रभाव परेको छ।
मी टिभी ४ एक्स (५५) मा ४ के १०–बिट एचडीआर डिस्प्ले रहेको छ जसमा शाओमीको इन–हाउस इमेज प्रोसेसिङ्ग एल्गोरिदम, भिभिड पिक्चर इन्जिनबाट यो पूरक छ। यसमा २० डब्लु स्पिकर रहेको छ जुन डल्बी अडियो र डिटिएस एच–डीका लागि प्रमाणित छ। यसमा गुगलको एन्ड्रोइड टिभी ९.० पनि रहेको छ जसमा गुगल एसिस्ट्यान्ट, युट्युब, क्रोमकास्ट, गुगलप्ले स्टोर र डेटा सेभर बिल्ट– इन छन्।
मी एलईडी टिभी ए प्रो ४३ टिभी अवलोकनलाई उत्कृष्ट बनाउन एक ४३ इन्चको १०८० पी फूल एचडी रेजोलुसनको साथ आउँछ। यसमा उत्कृष्ट अपरेटिङ्ग एक्पेरियन्सको लागि सिम्पल १२–बटन ब्लुटुथ मी रिमोट प्रस्तुत छ र डिटिएस एचडीको मद्दतले चौतर्फी ध्वनी प्रदान गर्न डुअल २० डब्लु स्टेरियो स्पिकर रहेको छ जसले उपभोक्ताहरुको घरमा आºनो ठूलो टिभीको पर्दामा एक सिनेम्याटिक एक्सपेरियन्स प्रदान गर्दछ।
मी टिभीको रेन्ज नेपालमा नेपाली ३४हजार ९९९ देखि १ लाख १९ हजार ९९९ रुपैयाँसम्म रहेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८, १९:१६:००